🥇 ▷ Baararka TV-ga ee Orange, dhammaan kubada cagta xilli ciyaareedka 2019/2020 ee goobaha madadaalada ✅
Baararka TV-ga ee Orange, dhammaan kubada cagta xilli ciyaareedka 2019/2020 ee goobaha madadaalada
Waxaan la kulannay dhowr toddobaad ka hor bilowga kubada cagta xilli ciyaareedka 2019/2020. Orange waxaa ka go’an inuu soo bandhigo dhammaan wareejinta ciyaaraha, marka lagu daro waxyaabaha xiisaha leh ee isboortiga, ee la soo bandhigo Baararka TV Orange.
Orange wuxuu bilaabaa soojeedin si uu isugu dayo inuu u soo jiito dhammaan qaybta cuntada iyo hoyga, oo sidaas ku raaxeysta dhammaan kubada cagta xilli ciyaareedka.
Waxaa loogu talagalay macaamiisha cusub ee iska diiwaangelisa adeegga Orange TV Bars adeegga. Qiimaheeda inta lagu jiro bisha Ogosto ilaa Sebtember 8 waa 259 euro bishii oo lagu daray VAT. Marka qiimaha ka baxsan gudbinta madadaalada noocan ahi yahay 280 euro oo lagu daray VAT.
Baararka TV-ga ee Orange waxaa ku jira dhammaan soo bandhigida kubada cagta dalka iyo caalamiga laga bilaabo 2019/2020:
LaLiga Santander (Qaybta 1aad), oo ay ku jiraan taageerada Real Madrid iyo F.C. Barcelona.
LaLiga SmartBank (Qaybta 2aad).
Horyaalka Uefa Champions League.
UEFA Super Cup (ciyaar udhaxeysa kooxihii ku guuleystey Champions League iyo UEFA Europa League, sanadkaan wuxuu noqon doonaa Liverpool FC vs Chelsea, Ogosto 14).
Baarayaasha Orange TV Bars waxay bixiyaan kuma koobna oo keliya kubada cagta, laakiin waxay noqon doontaa sababta ugu weyn ee meelaha noocaas ah ee goobaha madaddaalada ay u raadsan doonaan inay shaqaaleeyaan. Shirkaddu sidoo kale waxay khamaaraysaa soo saaridda kuwa kale dhacdooyinka isboorti ee xiisaha leh sida ay noqon karaan Roland Garros, Ku noqo Spain…
Baararka TV-ga ee Orange ayaa waliba isku dhafan 13 kanaal dheeraad ah waxa ku jira kala duwanaansho sida wararka gobolka ama mawduucyada heesaha ah, muusikada, karinta ama kanaalka dukumiintiga. Waxa kale oo ku jira kanaalada Eurosport 1 iyo 2.
Haddii aad leedahay sicirka Ganacsiga Jacaylka, waxaad ku heli kartaa deeqdan a 50% gunno inta lagu guda jiro 6-da bilood ee ugu horreysa.
Xusuusnow in qiimaha shirkadaha intiisa kale ay aad uga badan yihiin waxa ay Orange ku bixiso meelaha madaddaalada, tusaale ahaan, kubada cagta dhowaan lagu dhawaaqay marti-gelinta Movistar. Marka waa laga yaabaa Baararka TV Orange Noqo mid ka mid xulashooyinka ugu xiisaha badan ee Kubada cagta 2019/2020.
Maxaad u aragtaa soo-jeedinta cusub ee TV-ga Orange TV ee meelaha madaddaalada? Miyaad u malayn inay taasi guuleysan doonto?